"Omeo fahalalana aho mba hitandrina ny lalanao; eny, hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho" — Sal. 119:34.
Miparitaka manerana ny sahan'ny fanambarana ireo loharano soa mitondra fahamarinana, fiadanana ary fifalian'ny lanitra. Ireo loharanom-pifaliana ireo dia azon'ny mpandinika tsirairay avy hatonina. Ny teny avy amin'ny tsindrimandry, saintsainin'ny fo, dia ho toy ny rano mikoriana avy amin'ny reniranon'ny ranon'aina. Nangataka ny Mpamonjy mba hosokafana ny sain'ireo mpianany hahalala ny Soratra Masina. Isaky ny mianatra ny Baiboly amim-pivavahana isika dia tsy lavitra ny Fanahy Masina hanokatra amintsika ny hevitry ny teny izay vakintsika. Ny olona izay nohazavaina tamin'ny fanokafana ny Tenin'Andriamanitra ny sainy mba ho takany, dia tsy mahatsapa fotsiny fa tsy maintsy mandinika lalina izany Teny izany, fa tsy maintsy manana fahalalana bebe kokoa mikasika ny siansa ihany koa. Hahatsapa izy fa nantsoina amin'ny antso masina ao amin' i Kristy Jesôsy.
Arakaraka ny hananan'ny olona fifandraisana ety kokoa amin'Ilay Loharanon'ny fahalalana sy fahendrena rehetra, no hahatsapany bebe kokoa fa tsy maintsy mandroso amin'ny fahombiazana ara-tsaina sy ara-panahy izy. Ny fanokafana ny Tenin'Andriamanitra dia mandrakariva no arahin'ny fanokafana sy fanomezana hery manokana ny fahaiza-manaon'ny olona; fa manome fahazavana ny fidiran'ny Teniny. Eo am-pibanjinana ireo fahamarinana lehibe dia misandratra ny saina, voadio sy mendrika ireo fironana; manetsika ny fahaiza-manao ara-panahy maty ny Fanahin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fahamarinan'Andriamanitra ary sarihiny hijery ny lanitra ny fanahy.
Koa raiso ny Baiboly ary manatona eo anatrehan'Andriamanitra, manao hoe: "Hazavao aho; ampianaro ny fahamarinana aho". Hamaly izany vavaka izany ny Tompo, ary hizara ny fahamarinana amin'ny fanahy ny Fanahy Masina. Rehefa mandinika ny Soratra Masina ianao, dia hiorina amin'ny finoana. Tena zava-dehibe indrindra ny handinihanao ny Soratra Masina tsy tapaka, hitahiry ao an-tsaina ireo fahamarinan'Andriamanitra. Mety handao anao ireo namanao kristianina, ary mitoetra eo amin'ny toerana tsy ahafahanao mihaona amin'ireo zanak'Andriamanitra ianao. Ilainao ireo haren'ny Tenin'Andriamanitra miafina ao am-po, koa raha tonga aminao ny fanoherana, dia azo sedraina amin'ny Soratra Masina ny zavatra rehetra. - BE, 15 Oktobra 1892.